I-Georgica Kookaburra Cottage - I-Airbnb
I-Georgica Kookaburra Cottage
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLiz & Bob
I-Kookaburra Cottage ikwilizwe eliphumlileyo kwithafa elincinci elineembono ezimangalisayo zeentaba ukuya eMt Nardi, Blue Knob, Nightcap Range kunye neNSW/Queensland Border Ranges. Indlu encinci imalunga neyure enye yokuqhuba ukuya elunxwemeni ukusuka eEvans Head ukuya eByron Bay kunye neWorld Heritage National Parks. Esi sisetingi esifanelekileyo sokuhamba ngoxolo.
Indlu yelizwe lethu ikwindawo yabucala yegadi eneembono ezintle zentaba emantla, ilungele ukuphumla okuthe cwaka emaphandleni. Nceda uzive ukhululekile ukonwabela igadi kunye nokuhamba ngeendlela zelizwe ezolileyo.
Isidlo sakusasa sase-Continental siyabonelelwa, nangona kunjalo imveliso entsha yasefama inokufumaneka ngamaxesha onyaka (ukuba iichoki zibekwe). Indawo yokuhlala inekhitshi elizimeleyo / indawo yokuphumla, kunye nesitovu esincinci, imicrowave kunye ne-BBQ kumgangatho wokupheka. Iindwendwe kufuneka zize nokutya kwazo kwaye luluvo oluhle lokuthenga igrosari phambi kokuba ufike.
I-cottage inegumbi lokulala elinokumkanikazi elinye elinegumbi lokuhlambela elidibeneyo kunye nebhedi yesofa kwindawo yokuhlala / yasekhitshini.
Ukuqhuba kuphela kwendlela yokujonga le ndawo, thatha uhambo ukuya eByron Bay kunye neelwandle ezingqongileyo. ILismore liziko lethu lengingqi kwaye ineendawo zokutyela ezintle kunye neegalari zobugcisa kwimizuzu nje engama-25. Kukuqhuba lula ukuya eNimbin nakwiilali ezininzi zelizwe kule ndawo kunye ne-15 min ukuya kwivenkile yaseGoolmangar ukuba ufuna izinto eziyimfuneko. igrosari, utywala kunye nezinto ezithathwayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Liz & Bob
Siyavuya ukwamkela iindwendwe zethu kunye noncedo ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi, nangona kunjalo siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye sinethemba lokuba uyakonwabela ukuhlala kwakho.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Georgica